Litho Suka Appearances :: People's Assembly
Litho Suka »
Ndiyazibulisela kuSihlalo wale Ndlu yoWiso-mthetho, kuMphathiswa weli sebe, kuBaphathiswa bamaphondo, kumaLungu ePalamente ahloniphekileyo akule Ndlu, kwiSebe lezoThutho nakwiindwendwe ezibalulekileyo ezilapha phakathi kwethu, kuthiwa masize kuthetha, sithethe esikwaziyo singqine esikubonileyo. Gqwidi nje, Sihlalo wale Ndlu yoWiso-mthetho, kuba bendiba ndiza kukhe ndibhekise nakumalungu alo mbutho mtsha, kodwa ndiyabona ukuba emkile ke onke ...
RIGGING OF TENDERS IN MOOKGOPHONG LOCAL MUNICIPALITY (Member's Statement) 4 Mar 2014
NOTICES OF MOTION 12 Nov 2013
That the House debates mechanisms to ensure the growth, success and sustainability of women's co-operatives.
Merchant Shipping (International Oil Pollution Compensation Fund) Bill (Second Reading Debate) 12 Sep 2013
Somlomo, malungu ale Ndlu abekekileyo, nam mandizathuze ndihlomle kule ngxoxo yanamhlanje ibaluleke kangaka nejolise ekungcolisweni kweelwandle zethu ziinqanawa ezidlula kweli loMzantsi Afrika, zithwele imithwalo emikhulu nemincinane.
UMzantsi Afrika lilizwe elinonxweme elibude bungamawaka amabini amakhulu asixhenxe namashumi alithoba enesibhozo eekhilomitha. Lulwandle olunamandla namaza anomsindo ngeyona ndlela xa sele lulwile, into emana ...